Shiinaha Muraayadaha Muraayadda ah ee Ragga iyo Dumarka Cadceeda Midab Muraayad Midabkeedu yahay 100% Soosaarka Soosaarida UV iyo Warshad | Baolai
Muraayadaha muraayadaha ee ragga iyo dumarka ah ee qoraxda ah
1. jir caag ah
2. kala qaybsanaan
3. ★ KU ilaali indhahaaga Y Waxaan u abuurnay muraayadaha muraayadaha indhaha ah si aan u ilaalino indhahaaga inta aad kujirto hoosta qoraxda waxyeelada leh ee qorraxda UV iyo inaad kaa dhigto mid aan LAGA HELI karin isla waqtigaas, maxaa yeelay waxaan ognahay in Caafimaadka iyo Style-ka labaduba muhiim yihiin. Haddii aad baabuur wadid, socod ama shaqo, haddii aad tahay nin ama naag, diyaari naftaada dhammaan feejignaanta koowaad ee aad heli karto iyo hinaasaha dhammaan kuwa aan garan karin SIRTA YAR: Muraayadahaaga KALIYADI.
4. ★ KU SII BADAN MAALIN WALBA lass Muraayadahaas muraayadaha muraayadaha ahi waxay la yimaadaan LAYNOOLYADA LA SHAQEEYAY ee ugu sarreysa ee aan tijaabinay waqti ka dib. Kala-baxa ayaa hoos u dhigaya dhalaalka ka muuqda muraayadaha, waxyaabaha dhalaalaya ama dhalaalaya ama nooc kasta oo shucaaca qorraxda ka tarjumaya. Waxaad dareemi doontaa indhahaaga si joogto ah dabacsan maxaa yeelay mar dambe ma xoqi doontid! Haddii aad gaari u wadid shaqada, haddii aad lugeynayso jardiinada dhexdeeda ama aad ku nasatid qorrax wanaagsan xeebta, waxaa lagaa caajisi doonaa dhamaadka maalinta maxaa yeelay indhahaaga ayaa KA BADAN RELAXED.
5. ★ ADUUNKA KA EEG MIDABADIISA DHABTA AH lens Muraayadaha HD-ka ee iskudhafka ah ee muraayadaha qorraxda ayaa bixiya QALABKA RUNTA DHAQAN sababtoo ah dusha midabka dhexdhexaadka ah iyo MUUQAALKA CADAW iyadoo laga takhalusi karo iftiinka ka muuqda oo faafay. Sidaa darteed waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato muraayadaha indhaha inta lagu jiro dhammaan howlahaaga banaanka, wadista, kalluumeysiga ama cayaaraha biyaha sidoo kale. KALIYA KA FIKIR SIDEE UGU FIICAN YAHAY EE AAD DAREEN DOONTO inaadan ka walwalin caafimaadka indhahaaga adigoo awood u leh inaad ku raaxeysato kuna raaxaysato adduunka faahfaahin kasta oo qurux badan.
6. ★ GUUR BILAASH OO AAD XAQ U LEEYAHAY ▶ Waan ognahay sida looxyada raaxo la'aanta u noqon karaan iyo sida ay taasi u saameyneyso qof kasta oo xiran. Waxaan danaynaynaa aragtidaada waxaanna rabnaa inaan kaa caawino inaad muraayadaha qorraxda ilaashato inta aad ubaahantahay. Sidaa darteed waxaan u soo xulnay qalab aad u fudud-fudud oo loogu talagalay muraayadda muraayadaha indhaha, muraayadaha muraayadaha jajaban oo taxaddar leh waxaanna ka taxaddarnay in gees walba loo jilciyo oo la safeeyo sidaa darteed WELIGEY MAWWAD ILAWI KARTAA IN AAD KU XIRTID qorraxda. Xirashada muraayadaha indhaha ayaan waligeed ka nasanayn, ka ammaan iyo raaxo badnayn hadda!
Shayga MAYA. 10161-6354
Cabir 53x60x17 cm
Hore: Muraayadaha Aviator-ka ee Ragga 100% UV Alloy Frame Alloy
Xiga: Jumladaha Jumlada Jumlada ah ee loogu talagalay Dadka Waaweyn Xisbiyaddu waxay jecel yihiin Hooska Hore ee Hore
Aviator Muraayadaha Ragga
Muraayadaha Aviator-ka ee Ragga
Muraayadaha Muraayadaha Madow
Muraayadaha muraayadaha ee ragga
Rimless Muraayadaha indhaha Ragga
Muraayadaha Muraayadaha Labaad
Muraayadaha muraayadaha casriga ah ee ragga